Ukwenza Uhambo Lokuthenga LweKhasimende lube ngokwakho: Martech Zone
Ukwenza Uhambo LweKhasimende Lokuthenga Lube Lwakho uqobo
NgoLwesihlanu, Septhemba 25, 2015 NgoLwesihlanu, Septhemba 25, 2015 ULaura Swanson
Ukulungelelanisa ulwazi lokuthenga kubathengi ngabodwa akuwona umqondo omusha. Cabanga nje ngomuzwa owutholayo lapho uvakashela indawo yokudlela yasendaweni futhi uweta ukhumbula igama lakho nele lakho ejwayelekile. Kuzwakala kukuhle, akunjalo?
Ukwenza ngezifiso kumayelana nokwenza kabusha lokho kuthinta komuntu siqu, kukhombise ikhasimende ukuthi uyaliqonda futhi uyamkhathalela. Ubuchwepheshe bungavumela amaqhinga wokwenza kube ngokwakho, kepha ukwenza ngezifiso kweqiniso isu namasu okubonakala ekuxhumaneni kwamakhasimende ngakunye nomkhiqizo wakho.
Kulula ukusho kunokwenza. Abathengisi nemikhiqizo balwa nokuthi baqale kuphi, yini okufanele ibekwe eqhulwini nokuthi iziphi izixazululo zokusebenzisa. KwaFitForCommerce, amaklayenti ethu avame ukubuza ukuthi “Yini engingayenza ukuze ngenze ngezifiso ulwazi lwamakhasimende?” Njengoba ubungalindela, asikho isisombululo se- "one-size-fits-all".
Ukuletha okuhlangenwe nakho kokuthenga okwenziwe ngezifiso esikalini – kuya ezinkulungwaneni noma emakhulwini ezinkulungwane zamathemba namakhasimende wamanje – kudinga ukulinganisa amasethi wedatha asezingeni eliphezulu, izinqubo nobuchwepheshe. Lokho kungazizwa kukhungathekisa. Vele, abathengisi bangasebenzisa ubuchwepheshe obusha obenza bakwazi ukwenza ukuhlolwa kwe-A / B, ukuqoqa idatha, noma ukwenza ngokwezifiso ukumaketha kwe-imeyili noma okuhlangenwe nakho kwesayithi. Kepha, ngaphandle kwesu eliphelele, la maqhinga akude kahle.
Muva nje sihlolisise abaphathi bezinga eliphezulu abaphezulu kwekhulu, senze izingxoxo eziningi nabathengisi kanye nabahlinzeki bezobuchwepheshe, kanye nokusebenzisa ulwazi lwethu mathupha ngombiko wethu wonyaka wezi-100, Masizitholele Okwethu: Ukwenza ngezifiso i-Omnichannel Emhlabeni Oxhumeke Nge-Hyper. Umbiko unikeza isu elihlanganayo lokuhlanganisa ukwenziwa komuntu uqobo kwisinyathelo ngasinye sohambo lokuyothenga — kusuka ekumaketheni kuze kufike ekulethweni komkhiqizo.
Kungani kufanele ukhathalele?
Impi yokuwina amakhasimende nokwethembeka kwamakhasimende ayikaze ibe namandla kakhulu futhi amakhasimende awakaze abe nzima kakhulu. Akunandaba ngesiteshi, amakhasimende akho alindele ukuthi imilayezo yokukhangisa ihlangane futhi, okuqukethwe kube wusizo, nemikhiqizo nokunikezwayo kufanelekile. Uma wenza lokhu kahle, kuzothinta kahle umugqa wakho ophansi. Amakhasimende amaningi azokwabelana ngenjabulo ngemininingwane yomuntu uqobo ngaye uma azi ukuthi izonikeza lezi zimo ezifanele nezizimele.
Kuningi ongakwenza, kuncane kakhulu…
Isikhathi? Izinsizakusebenza? Yazi kanjani? Ukungena? Lezo ngezinye zezinselelo ezicashunwe ngabathengisi ekuzameni ukusebenzisa isu elenziwa ngezifiso. Mhlawumbe iSinyathelo sokuqala ekubhekaneni nalezi zinselelo ukuphathwa kwabaphathi. Lapho abaphathi abaphezulu beqonda ukuthi ukwenza ngezifiso imali kungakhuphula kanjani imali, uthola ithuba lokuthola izinsizakusebenza noxhaso oludingayo.
Ukwenza ngezifiso kuyinto eza kuqala, futhi kufanele kube yinto ephambili
Ukwenza ngezifiso ngokusobala kubaluleke kakhulu ebhizinisini lemikhiqizo, noma bengazi ukuthi bangenza kanjani. Ama-31% abaphathi esibahlolile bathi ukwenza ngezifiso kungenye yezinto ezintathu eziseqhulwini zabo zonyaka we-2015.
Yidabule ibe izakhi zokusebenza ezihlelekile phakathi kohambo lokuthenga. Cabanga ngokuthi ungenza kanjani ngezifiso isipiliyoni esigabeni ngasinye.
Ukuthola ukunakwa kwakhe. Yini emdonsela kusayithi lakho? Ungakusebenzisa kanjani lokho okwaziyo mayelana nekhasimende lakho ukuhlanganyela nalo?
Unake yena. Manje, ungakusebenzisa kanjani okuqukethwe okwenziwe kwaba ngokwakho, okunikezwayo, amasu okuthengisa kanye nezindlela ezinhle zokugcina ukuzibandakanya kwakhe nokuvala ukuthengisa?
Mjabulise nakakhulu. Lapho i-oda selibekiwe, ungakwenza kanjani ngezifiso ukulethwa komkhiqizo, ukupakisha kanye nokwenziwa kwamakhasimende ukuze uqinise ubudlelwano bakho naye?
Vikela creepy isici. Ubumfihlo nokuphepha kuyakhathaza. Uluthatha kanjani ulwazi lakhe futhi ulivikele?
Ingcina ekugcina konke ndawonye. Hlobo luni lwedatha okufanele uyithwebule, uyiqoqa kanjani futhi, okubaluleke kakhulu, ukuthi uyisebenzisa kanjani ukudala okuhlangenwe nakho komuntu siqu.
Lapho usudlulile ekusebenziseni ukuqonda ukuthi ungakwenza kanjani ngezifiso lonke ulwazi, ukukhetha ukuthi ungakwenza kanjani nokuthi yibuphi ubuchwepheshe obusebenzisayo buba lula. Akungabazeki ukuthi le nsimu izoqhubeka nokuvela futhi abathengisi nemikhiqizo esebenzisa nokucwenga imizamo yabo yokwenza kube semathubeni amahle okuwina umjaho wokuguqulwa kwamakhasimende nokwethembeka kunalabo abangawenzi.
IFitForCommerce ingumeluleki we-boutique osiza amabhizinisi e-ecommerce kanye ne-omnichannel ukwenza izinqumo ezihlakaniphile zokutshala imali kumasu, ubuchwepheshe, ukumaketha, ukuthengisa, ukusebenza, ezezimali, ukwakheka kwenhlangano nokuningi. Ababonisi bethu bangabantu abasebenza ngokuthengisa noma abasebenza ngemikhiqizo abasebenzisa ulwazi lwabo ukuze banikeze umhlahlandlela wamasu nezandla kukho konke okudingekayo ukwakha, ukukhulisa nokusheshisa ibhizinisi lakho.
IFitForCommerce izobe ikhombisa ku- Umhlangano Wedijithali weSitolo.org ePhiladelphia ngo-Okthoba 5th-7 etendeni # 1051.
Tags: Ukuhamba kwamakhasimendeubumfihlo bamakhasimendeukuphepha kwamakhasimendeukuzenzelangezifiso
ULaura Swanson ungumeluleki omkhulu kwaFitForCommerce, uneminyaka engaphezu kwengu-20 yobuholi ekuthengisweni kabusha kweziteshi eziningi, okuvula izindawo eziningi zobungcweti - kusuka ku-Buying, Planning & Allocation, Staffing, Marketing Operations, IT / Telecom kanye ne-Clienteling to Omnichannel Strategy.
Kukhona i-Ton Value ye-B2B ku-Social Media